Fifidianana Filankevi-Pitantanana GV 2017 : Arzu Geybulla(yeva) · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana Filankevi-Pitantanana GV 2017 : Arzu Geybulla(yeva)
Voadika ny 15 Marsa 2017 1:57 GMT
Ry namana malala, mpikambana ao anatin'ity fiarahamonina tena sarobidy sy maro karazan'ny GV ity!
Manoratra ity lahatsoratra ity aho mba hampahafantarako ny tenako satria izaho koa, dia voatendry ho kandidà hisolo tena ireo mpilatsaka an-tsitrapo. Na dia tsy maintsy miteny aza aho hoe tena mahatsiaro ho toa zara raha vonona tsy toy ny mahazatra. Tena mety ho vokatry ny fiaviako avy any Azerbaïdjan izany, sy ny tsy tena fahaizako ny fifidianana (na koa noho ny tsy fananako traikefa mikasika ity raharaha ity). Koa noho izany, voatendry, amina fifidianana – tsy vaovao fotsiny ny hevitra, fa toy ny nolazaiko, sady tsy mahazatra no mampientam-po ihany koa.
Izany hoe, tena mihoatra noho ny nomena voninahitra aho amin'ny mahavoatendry miaraka amin'ireo mpikambana GV mahaliana maro sy manan-talenta.
Koa izany, voalohany, izaho no Arzu Geybulla(yeva) avy any Azerbaïdjan, mitoetra nanomboka taona vitsivitsy tao Istanbul. Mpanao gazety nahavita fianarana aho ary mamakafaka ny mikasika an'i Azerbaïdjan nanomboka tamin'ny 2009. Fa efa navitrika ihany koa tamina fampielezankevitra fisoloana vava ho an'ireo gadra politika any Azerbaïdjan ary efa nandray fitenenana taminà hetsika iraisam-pirenena maro, amin'ny fanolorana kabary mikasika ny faharatsian'ny toetry zon'olombelona sy ny fahalalahana ao amin'ny fireneko.
Kanefa ny tena firehetampoko voalohany dia ny manoratra sy mitantara. Toy izany ny fomba nanombohako ny asa fanaovana gazety. Nanomboka bilaogy iray aho tamin'ny 2008 ary izay tsikelikely nanomboka toy ny fialamboly no nitondra ahy hanoratra ho ana haino aman-jery sosialy mandrakotra ny fivoarana politika ao Azerbaïdjan. tamin'ny 2014, neken'ny BBC ny asako ary tafiditra tao anatin'ireo vehivavy 100-n'ny taona aho.
Ankehitriny dia manohy ny asa fanaovako gazety aty am-panaovana sesitany ny tenako aho amin'ny fandrakofana an'i Azerbaïdjan.
Tamin'ny 2009 aho no tonga tato anatin'ny fiarahamonina GV. Miaraka tamina taom-pitsaharana kely teo anelanelan'ireo taona roa ireo, faly aho tamin'ny fahafahako miverina miditra indray tamin'ny 2013. Ho ahy, ny lafiny tena mahavariana amin'ny fiarahamonina GV dia ny fanolorantena an-tsitrapon'ireo mpandika teny sy ny vintana omen'ny olona ho an'ireo mpanoratra, amin'ny fahitana ny lahatsorany averina hadika amin'ny teny hafa. Amin'ny tena izany, ho ahy, dia majika. Satria amin'ny maha mpanao gazety rehefa manoratra lahatsoratra ianao, manoratra am-panantenana fa mba ho voavaky in-be dia be farak'izay tratra izany ary hahatratra ireo vazan-tany maro eran-tany. Namorona izany fahafahana izany ny GV ary noho izany, mbola velom-pankasitrahana ho azy foana aho.
Ary avy eo dia mazava ho azy, manana ity fiarahamonina tena marolafy ity ianareo izay mankafy ny filazana tantara ary tena mampahazo aina ahy izany amin'ny fahafantarana fa misy fiarahamonina izay tena hahatokisako tena tanteraka ary raha toa koa misy zavatra manjo ny iray amintsika, mivondrona isika. Tamin'ny nanampiako lalandava ireo gadra politika, ny fianakaviany, amin'ny fanaovana fampielezan-kevitra fisoloana vava, toerana iray azo ianteherana foana no nahitàko ny GV, mba hanabaribariana ny tranga, sy hiantsoana fanohanana iraisam-pirenena.
Noho izany, tena voninahitra lehibe ny mahavoatendry mba hisolo tena ity fiarahamonina ity. Matetika mihevitra ny GV ho toy ny hazo noely aho, fa ny maha-samihafa azy dia ity iray ity tsy ho ahoronao mihitsy ho ampidirina ao anaty boaty. Mijoro foana izy, mahitsy, miloko, ary vonona ny hanome toky ireo olona amin'ny fisiany.
Maniry ny tsara indrindra ho an'ireo voasoratra ao amin'ny lisitry ny voatendry aho. Ary voninahitra ho ahy mihoatra noho ny teny ny andraisako anjara amin'izany indray. Mirary soa ho antsika rehetra.